दसैंमा कोभिडको उपचार हुने अस्पतालमा कर्मचारीको ड्युटी कसरी मिलाइएको छ?
२०७७ कार्तिक ९ आइतबार १९:५०:०० प्रकाशित
काठमाडौं - फूलपातीबाट प्रायजसो कार्यालयहरु बन्द भएका छन्। सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरु दसैंको बिदामा छन्। तर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई न त दसैं तिहारले छुने गर्छ न कुनै चाडपर्वले नै। कारण हो, बिरामीको सेवा नै उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता हुने गर्छ।
यस वर्षको चाडपर्व विगतका वर्षहरुमा जसरी मनाउने अवस्था पनि छैन। कोभिड-१९का कारण अस्पतालहरु बिरामीले भरिभराउ छन्। दिनरात नभनी स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमितलाई निको बनाउन खटिरहेका छन्। दसैंलाई लिएर विभिन्न अस्पतालमा विशेष किसिमको ड्युटीको व्यवस्था गरिएको छ।
दसैंमा अस्पतालहरुमा के कसरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटी मिलाइएको छ त ? यी विषयमा हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल र भरतपुर अस्पतालका निर्देशकसँग कुराकानी गरेका छौं:
डा सागरराज भण्डारी, निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
चाडपर्व भएपनि अस्पतालहरुको सेवा कहिल्यै पनि बन्द गर्न मिल्दैन। दसैं, तिहार लगायत लामो बिदाका दिनहरुमा विशेष ड्युटी हुने गर्छ। त्यही अनुसार कर्मचारीहरुको ड्युटी सिफ्ट मिलाएका हुन्छौं। ड्युटी र समय मिलाएर कोही कर्मचारी काम गर्ने र केहीलाई बिदा मिलाएका पनि हुन्छौं।
अरु बेला र अहिले कर्मचारीहरुको ड्युटी मिलाउनु हाम्रो लागि नौलो होइन। सरुवा रोग अस्पताल भएकाले पनि विभिन्न महामारीको समयमा यस किसिमको ड्युटी मिलाउनुपर्ने भएकाले खासै अप्ठ्यारो भने पर्दैन। यसअघि डेंगुको महामारीमा पनि हामीले यस किसिमको ड्युटीको व्यवस्थापन गरेकाले हाम्रो लागि भने नयाँ अभ्यास होइन। हामीले यो व्यवस्थापन गरिरहेको विषय हो।
यस वर्षको दसैं म बाहिर गएर नभई परिवारसँगै मनाउने योजनामा छु। अहिले कोरोना महामारीको समयमा बाहिर जमघट तथा घुलमिल हुनु स्वास्थ्यका लागि पनि जोखिमपूर्ण छ। सामाजिक सञ्चाल मार्फत शुभकामना आदान प्रदान गर्ने योजनामा छु। पहिलेको जस्तो अवस्था सामान्य छैन। त्यसैले सबैलाई नै यसरी परिवारसँग दसैं मनाउन सबैलाई सुझाव छ।
डा. केदार सेन्चुरी, निर्देशक, वीर अस्पताल
दसैंमा हामीले सबैलाई मिलाउनका लागि विशेष ड्युटी बनाएका हुन्छौं। चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीका लागि विशेष ड्युटी बनाएका छौं। दसैंमा काम गर्ने कर्मचारीले सट्टा बिदा या भत्ता पाउँछन्। कोभिड र नन कोभिड दुवैका लागि हामीले स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटी मिलाएका छौं।
दसैंको बेलामा ड्युटी मिलाउन अलि अप्ठ्यारो त हुन्छ नै। किनभने दसैंमा धेरैजसो दसैं मनाउनका लागि बिदा माग्ने गर्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। दसैंमा बिदा नबस्ने तिहारमा बस्न पनि पाउँछन्। आलोपालो गरेर ड्युटी मिलाएका हुन्छौं।
यो वर्ष परिवारसँगै दसैं मनाउने योजनामा छु। आफन्तकोमा जाने, जमघट हुने जस्ता कार्यक्रमलाई कम गरेको छु। निर्देशकको हिसाबले जिम्मेवारी धेरै छ। त्यसैले दैनिक रुपमा अस्पतालमा हुने घटनाक्रम बारे जानकारी हुनुपर्छ। ढुक्क भएर दसैं मनाउने अहिले अवस्था छैन। दसैंसँगै हामी सतर्क पनि हुन आवश्यक छ।
डा राजन पाण्डे, मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट, भरतपुर अस्पताल
अहिले विगतका दसैंहरुमा जस्तो अवस्था सामान्य छैन। त्यही भएर पनि यस वर्ष हामीले कर्मचारीहरुको ड्युटी मिलाउँदा विशेष तरिकाले मनाउन आवश्यक थियो।
चिकित्सकहरुलाई सकेसम्म बिदा नबस्न परिपत्र भएर आएको हुनाले पनि हामीले सोही अनुसार ड्युटी मिलाएका छौं। त्यही भएर अहिले धेरै जना बिदा पनि बस्नु भएको छैन। कोभिडले गर्दा पनि दसैं मनाउन बाहिर जाने क्रम यस वर्ष अलि कम नै भएको छ।
सुरुमा सबैले बिदा चाहियो पनि भन्नु भएको थियो। तर अहिले कोभिड कारण हामीले सबैलाई काउन्सिलिङ गरेपनि मान्नु पनि भयो।
दसैंलाई लिएर यस वर्ष मेरो कुनै विशेष योजना छैन। दैनिक अस्पताल जाने गर्छु। त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्ने मेरो प्रमुख दायित्व छ। विगतका वर्षहरुमा घुम्न जाने लगायत कार्यक्रम गरेको थिए। तर अहिले अवस्था सामान्य नभएका कारण दसैंलाई लिएर मेरो विशेष योजना नै छैन। अस्पतालकै सेवामा खटिने योजनामा छु।
५. बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु दैनिक धर्नामा
६. कोरोनाविरुद्धको खोप प्रतिडोज ३७ डलरसम्म पर्छ : मडेर्ना
८. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ६८ करोड दिने संघीय सरकारको निर्णय
१०. समायोजन भएर रमाना नलिएका र लिएका स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा ५ बुँदे निर्णय